Pyae Sone Phyo starts working asabusiness advisor at NFX Consultant Company
Author Pyae sone PhyoPosted on July 16, 2020 July 16, 2020 Leaveacomment on Pyae Sone Phyo starts working asabusiness advisor at NFX Consultant Company
Look so hot and delicious. Hey man,you deserve to eat
1 ဗူးကို 3000 ပါ
ခေါက်ဆွဲ စားရင် တစ်သက်မမေ့မဲ့ အရသာခံစားရမှာဖြစ်ပြီး feature photo ကတော့ လူကြီးမင်းတို့2မိနစ်ဘဲစားနိုင်ပြီး မေ့မှာပါ
ခေါက်ဆွဲမှာယူချင်တယ်ဆိုတင်တော့ 09443166275 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်နော် Cb ကနေလည်းလာရောက်မှာကြားနိုင်ပါတယ်
အရမ်းhot အရမ်းစပ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ စားခြင်းဖြင့် အရမ်းhot တဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုပါ စားရပါစေရှင်
Author Pyae sone PhyoPosted on July 11, 2020 July 11, 2020 Leaveacomment on Look so hot and delicious. Hey man,you deserve to eat
PyaeSonePhyo has confirmed that he will leave University of Yangon in January (2021)
Author Pyae sone PhyoPosted on July 1, 2020 July 1, 2020 Leaveacomment on PyaeSonePhyo has confirmed that he will leave University of Yangon in January (2021)
Author Pyae sone PhyoPosted on June 13, 2020 June 13, 2020 Leaveacomment on ဖင်နှိုက်ခံချင်လို့ရဲကိုဖင်ထဲမူးယစ်ဆေးပါကြောင်းကိုယ်တိုင်သတင်းပေးခဲ့တဲ့မရမ်းကုန်းကအမျိုးသား
Author Pyae sone PhyoPosted on May 23, 2020 May 23, 2020 Leaveacomment on နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းချဲ့ပြီးစီးပွားရေးသောင်းကျန်းဖို့အစီအစဥ်ရှိနေတဲ့ပြည့်စုံဖြိုး
နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းချဲ့ပြီး စီးပွားရေးသောင်းကျန်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံဖြိုး
Author Pyae sone PhyoPosted on May 23, 2020 May 23, 2020 Leaveacomment on နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ငန်းချဲ့ပြီး စီးပွားရေးသောင်းကျန်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံဖြိုး
အာစင်နယ် ကိုရောက်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ စောခိုင်ခန့်ကျော်
2017 ခုနှစ်က အာစင်နယ် အသင်းဟာ အာရှ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားဖို့ စင်ကာပူ ကိုရောက်ရှိလာတုန်းက ခရွန်ကီရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ အာဆီယံ က ပေါ်ချောင်ကောင်း player တွေရဖို့ကလည်း အဓီကပါဝင်ခဲ့ပါတယ် မြန်မာပြည် ကို စုံစမ်းဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ အာဆင်နယ် agent အဖွဲ့ဟာ လေဆိပ်ကနေ မြောက်ဥက္ကလာ ဘက်ကလာရင်း အိမ်ရှေ့မှာ ဘောလုံးထွက်ကန်နေတဲ့ ခိုင်ခန့်ကို သတိထားပြီး အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ ဝီရှိုင်းယား နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ နဲ့ ခိုင်ခန့်ကို YIUS မှာ English စာသင်ပြီး 2018ဇန်နဝါရီလမှာ londonကိုခေါ်ဖို့စီစဉ် ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ခိုင်ခန့်ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ အတူ ဆေးစစ်မှု တွေအောင်မြင်ခဲ့တာ​ကြောင့်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာဖို့နီးစပ်လာပါသေးတယ်
သို့သော်လည်း အာဆင်နယ် အသင်းနှင့် လစာ ညှိနှိုင်းရာမှာတော့ ခိုင်ခန့်က တစ်ပတ် ကို ဒေါ်လာ 2000 တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အာဆင်နယ်အသင်းထံမှ ဒေါ်လာ 2000 ကိုတစ်လစာသာ ပေးနိုင်ကြောင်းညှိနှိုင်းရာမှ အပြောင်းအရွှေ့ပျက်ပြယ်ခဲ့ပါတယ် လက်ရှိမှာတော့ ခိုင်ခန့်ဟာ Fifa 20 မှာ real madrid အသင်းရဲ့ play maker အဖြစ်ကစားနေပြီး ချန်ပီယံ လိဂ်ဖလားသုံးလုံး ဉရောပ စူပါဖလား နှင့် CWC ဖလားတို့လည်း ရရှိထားပါတယ်
Author Pyae sone PhyoPosted on May 22, 2020 May 22, 2020 Leaveacomment on အာစင်နယ် ကိုရောက်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ စောခိုင်ခန့်ကျော်
စော်မထားဘူးပဲ လူ့လောကထဲ ကျက်သရေ တုန်းလာတာ 18 နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ လွင်မင်းအောင်
ဒီကနေ့ 27 ရက်4လ 2020 တနင်္လာ နေ့မှာ ဆိုရင်တော့ မရမ်းကုန်း ကလေးချမ်းသာ ကိုစာမိ ခေါ် လွင်မင်းအောင်ဟာ 18+ ကိုလိပ်ပြာလုံစွာ ကြည့်ခွင့်ရသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ် 18 နှစ် မွေးနေ့ဖြစ်ပေ့မယ် quarantine အချိန် ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်မှာဘဲ ဖြစ်သလို လွယ်ကူစွာ bd လုပ်ခဲ့ ရပုံကို Story မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်
မွေးနေ့ဆုတောင်းကတော့ မသေမချင်း လလေးလုံးတွေပြောနိုင်ပါစေ ဗရုတ်လည်းကျနိုင်ပါစေ ကြယ်ကလေးတွေ ဝေဝေ ဆာဆာ နဲ့ နေနိုင်ပြီး
ကောင်မလေးတွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေ ပါစေ anime ကြည့်လိုက် ဂိမ်းဆော့လိုက်နဲ့ လည်း အမြဲ လောင်မြိုက်နေခြင်းမှ ကင်းဝေး၍ လိုတီးမှုဝေး သော အပုန်းစိတ်ပျောက်သော ကျက်သတုန်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
Author Pyae sone PhyoPosted on April 27, 2020 April 27, 2020 Leaveacomment on စော်မထားဘူးပဲ လူ့လောကထဲ ကျက်သရေ တုန်းလာတာ 18 နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ လွင်မင်းအောင်
18+ ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ maths မေဂျာက ယဥ်ကျေးမှူရဲ့ ပြယုဥ်ကြီး သဲဆုဝင်း
Maths6batch က စကားအပြောဆို ချိုသာ ညက်ညောသူ အဝတ်အစား အပြင်အဆင် ကောင်းသူအ ဖြစ်လူသိများတဲ့ မ သဲဆုဝင်း (အတုကောင်) ဟာဆိုရင်ဖြင့် ယနေ့
26.4.2020 မှာ လိပ်ပြာလုံစွာ 18+ စတင်ကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အကြောင်းမှာ လူ့ဘဝထဲ ရောက်ရှိ ကျက်သရေ တုန်းခဲ့သည်မှာ ဆယ့်ရှစ်နှစ် ပြည့်သွားတာကြောင့်ပါ .
ဇိုးစကွက်က ဓမ္မ မိတ်ဆွေ သဲဆုဝင်း အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုသည်မှာ စာမေးပွဲ resultတိုင်း ကောင်းသလို ဘဝလမ်းခရီး ဖြောင့်ဖြူးပါစေ ချစ်ရသူနဲ့လည်း တစ်သက်လုံး ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းသင်းနိုင်ရန် မှ အစပြု၍
လလေးလုံး ပြောခြင်း ဖြန်းခြင်း ဝိုက်ခြင်း များကို မသေမချင်း ပြုလုပ်နိုင်၍ ဖြဲချင်တိုင်းဖြဲနိုင်ပါစေ Cr7 BTS bunny phyoနဲ့ Lfc စတို့ကိုလည်း မသေမချင်း စပွတ်ပေးနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ် happy birthday pr အတုကောင်ရေ
Photo ref: Thw timeline
Author Pyae sone PhyoPosted on April 26, 2020 April 26, 2020 Leaveacomment on 18+ ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ maths မေဂျာက ယဥ်ကျေးမှူရဲ့ ပြယုဥ်ကြီး သဲဆုဝင်း
အိမ်မှာဘဲ နေရတာ ပျင်းလာပြီ ဆိုတဲ့ ပြည့်စုံဖြိုး
လီးဘဲ ပျင်းလို့ ဘာမှ မရေးထားဘူး
Author Pyae sone PhyoPosted on April 25, 2020 April 25, 2020 Leaveacomment on အိမ်မှာဘဲ နေရတာ ပျင်းလာပြီ ဆိုတဲ့ ပြည့်စုံဖြိုး